Soomaaliya oo isu diyaarinaysa inay ciidamo u dirto Koonfurta Sudan - Halbeeg News
Soomaaliya oo isu diyaarinaysa inay ciidamo u dirto Koonfurta Sudan
​​MUQDISHO (HALBEEG) – Soomaaliya ayaa isu diyaarinaysa sidii ay dalka Koonfurta Suudaan ugu diri lahayd ciidamo ka qayb qaata nabad ilaalinta, kaddib markii dhowaan dowladda iyo mucaaradka dalkaasi magaalada Addis Ababa ku kala saxiixdeen heshiis nabadeed oo lagu soo afjaray colaad socotey muddo shan sano ka badan.
Tallaabadan ayaa imaanaysa maalmo kaddib markii Urur Goboleedka IGAD uu usoo bandhigay dhowr dal oo Soomaaliya qayb ka tahay, in ay ciidamo nabad ilaalineed ku deeqaan, si ay qayb uga noqdaan Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Koonfurta Sudaan.
Wasiir Ku Xigeenka Waxbarasahda, Soomaaliya, Cabdiraxmaan Jaabir, ayaa sheegay in Soomaaliya ka labalabayn doonin inay ciidamo ugu deeqdo Koonfurta Sudaan.
“Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan sida ay suuragal ku noqonayso in dal Soomaaliya oo kale ah oo kasoo kabanaya khilaafaad iyo colaad, uu qayb ka noqdo hawlgal nabad ilaalin ah, maxaa noo diidaya in aan ciidan ku deeqno?” ayu yiri isagoo intaas raaciyey in Dowladda Burundi iyadoo xaaladda Soomaaliya oo kale ku jirta ay haddana ciidamo nabad ilaalin ah usoo dirtay Soomaaliya.
Ku dhowaad 17,000 oo askari oo hoos taga Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Nabad-ilaalinta Koonfurta Sudaan ayaa xilligan dalkaas ku sugan, kuwaas oo hawshoodu tahay sugidda ammaanka dadka rayidka ah, iyo weliba in ay hirgeliyaan jawi xasilloon oo suuragal ka dhigaya in shaqaalaha gargaarku caawiyaan dadka kaalmada u badan.
Khuburada arrimaha ammaanka ka faallooda qaarkood ayaa walaac ka muujiyey suuragalnimada qorshaha ay doonayso Soomaaaliya in ay uga mid noqto hawlgalka nabad ilaalinta Koonfurta Sudan, waxaana dadkaas kamid ah George Musamali oo ah la taliye dhanka ammaanka ah islamarkaana ah Madaxa Machadka Maareynta Masiibooyinka ee Afrika.
Musamali ayaa sheegay in Urur Goboleedka IGAD ula macaamilayo Soomaaliya sidii dal xasilloon, balse ay lagama maarmaan tahay in aan layska indho tirin caqabadaha dhanka ammaanka ee Soomaaliya xilligan la daalaa dhacayso, iskaba daa in ay dal kale nabadgelyadiisa wax ka qabatee.
“Dadka ayaa maskaxda looga ciyaarayaa…Waxaan qabaa kani [Soomaaliya] ma ahan dalkii ku habboonaa hawshan, sababtoo ah awoodda Al shabaab weli waa mid xooggan” ayuu yiri.
Urur Goboleedka IGAD ayaa dalalka Sudan, Somalia, Uganda iyo Djibouti ka codsaday in ay ciidamo ku deeqaan, si loogu biiriyo ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan Koonfurta Sudaan, kaddib heshiis ay toddobaad kahor magaalada Addis Ababa ku gaareen Madaxweynaha Koonfurta Sudan Salva Kiir iyo Hoggaamiyaha Mucaaradka Riek Machar.
Gaas oo xarigga ka jaray Jaamacadda Maakhir ee degmada Badhan
KENYA: Xoolo dhaqatada Soomaalida iyo beeralayda Giriama oo daaqa ku muransan